UDa Gama uyaziqhenya ngeGalaxy yize iyilahle ekugcineni - Impempe
UDa Gama uyaziqhenya ngeGalaxy yize iyilahle ekugcineni
U-Owen Da Gama
Ukuqeda ngaphakathi emaqenjini ayisishiyagalombili ngesizini yayo yokuqala kwiDStv Premiership bekuyoba yimpumelelo enkulu kwiTS Galaxy. Nokho leli qembu laseMpumalanga lishelele ekugcineni laphuma kwiTop 8 kulandela ukushaywa yiKaizer Chiefs ngo 1-0 ngoMgqibelo.
IRockets iye kulo mdlalo wayo wokusonga isizini idinga ukudlala nokulingana neChiefs ukuze iqede endaweni yesishiyagalombili. Akwenzekanga kanjalo, kodwa umqeqeshi, u-Owen Da Gama usaziqhenya ngabadlali bakhe.
“Engingakusho nje zisuka wukuthi ngiyaziqhenya ngalaba bafana,” kusho uDa Gama ngemuva komdlalo ophele ngo 1-0 wegoli likaSamir Nurkovic. UDa Gama uthi iningi labadlali bakhe bekungokokuqala bedlala esigabeni esiphezulu.
“Abanye bebedlala okokuqala kulesi sigaba kanti ukusuka la uyobhekana ne-Orlando Pirates. Uthi ubuya lapho bese uye kwiStellenbosch ebilwela ukuzihlenga ezembeni bese ubuya uza la ekhaya (ubhekane neChiefs) akuyona into elula eqenjini elisafika kulesi sigaba.
“Kodwa ngiyaziqhenya ngalaba bafana okudingeke bavale izikhala kade kukhona abamisiwe sibhekene nePirates… nalabo abavale izikhala sibhekene neStellenbosch.
“Engingakusho wukuthi kube yisizini emazombezombe kithi lena, kodwa sifunde lukhulu. Siyakuqonda ukuthi ukubeka leli qembu la sifuna liye khona yinto ezothatha isikhathi,” kusho yena.
UDa Gama ufike maphakathi nesizini kwiGalaxy ngemuva kokuxoshwa kukaDan Malesela owayeqale isizini naleli qembu. Uthi yize efice izinseko ezinhle, kodwa yikhathi ezokwazi ukulakha kahle ngendlela yakhe iqembu uma sebelungiselela isizini entsha.
“Yisizini yokuqala lena. Mina ngifike seyinesikhathi iqalile kodwa ngafica isisekelo sesakhiwe. Kuningi okuhle obekwenziwe. Ngethemba ukuthi ngizokwazi ukuqinisa iqembu bese sakha inqanawe esizolwa ngayo ngesizini ezayo.”
Previous Previous post: Uyanconcoza ngoCheeseboy umqeqeshi weSwallows
Next Next post: Ujabule ngendondo, kodwa isibalo samagoli sisamkhalisa uGrobler